Itoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee bara kana %10.4 dabale - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Itoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee bara kana %10.4 dabale
Woggaa woggatti ol ka'iinsa gatii meeshaalee (Itoophiyaafi biyyoota baha Afrikaa)
Akka gabaasa biiroo staatistiksii Itoophiyaatti gatiin meeshaalee woliigalatti %10.4 bakka bati woxabajji woggaa dabre ture irraa ol ka’uu isaati kan ifa godhe.
Gatiin nyaataa bara kana hedduu gubbatti kan oldhiibe gatii nyaata kanniin akka foonii, kudraafi fudraalee adda addaati. Gatiin nyaata kanniinii bakka bara dabre ture irraa %12.4n qaalayee kan argame. Baatii kanatti, bara dabre jechuudhaa, gatiin gosa nyaata kanniinii %10.1n dabaliinsa kan argisiisee ture.
Akka ibsa biiroo staatistiksii biyyattiitti bara kana gatiin meeshaalee biraa, kan nyaata hin ammanne, %8.2 kan ol ka’e.
Gatiin nyaataafi meeshaalee biraas woggaa woggatti bifa kanaan dabalaa deema taanaa woggaa muraasa keessatti gatiin isaa dadhaa kan ta’u. Kuni diinagdee hawaasichaa irratti balaa guddaadha. Galii ummataa xuruuree fudhachuudhan ummanni dadhabbii woggaa meeqaa boodas dukkanuma hiyyummaa keessa akka tirtiru nama godha. Egaa balaa kana hir’isuuf yeroo baay’ee mootummooleen biyya hedduu kan gatii meeshaalee tasgabbeesuu irratti imaammata cimaa baafatanii kan hojjattuuf.
gatiin meeshaalee qaalawuu
Previous articleGanzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte
Next articleItoophiyaan Raayyaa Woraana biyyattii 3000 oli Somaaliyaatti bobbaaste